A indlela wesikweletu ezijikelezayo kuyinto
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ A indlela wesikweletu ezijikelezayo kuyinto
Isikweletu esingu ezikhanyisayo, igama elisemthethweni ibizwa ngokuthi ezijikelezayo, yigama okusho ukukhokha njalo. Ngokuvamile, kwakusho ukuba akhokhe lemali ukuthi uzimisele ngenyanga, ngisho noma ukuthenga izimpahla ezibizayo, kuyinto lwesistimu ukuba siqedwe ngo uya kuphela ukukhokha njalo ngenyanga ethile.
lezimpahla intengo kunalokho kumelwe akhokhe ngesikhathi esisodwa, ngendlela ukukhokha kaningana abacindezela lemali ikhokhwe nyanga zonke ethile, uma uthenga umkhiqizo, isibonelo, 100,000 yen, nyangazonke isethi inani r ezikhanyisayo credit esimweni 10,000 yen, uthishanhloko kodwa kwabasiza ezikhathini 10, uthishanhloko kanye nesithakazelo yomugqa oqondile ezikhanyisayo credit ngayo isikhathi ukukhokha inzalo emkhosini waminyaka yonke we senzalo ka-10% of the isithakazelo kuyoba izinyanga 11, isamba ukukhokhelwa kuyoba 107.497 yen . Esikhathini credit ezikhanyisayo ngeke kuphinde kudingeke ukuba ukhokhe 100,000 yen ngesikhathi, kodwa indlela yokukhokha ozithandayo liyadingeka.
le ndlela yokukhokha, kukhona ngaphezu indlela futhi uthishanhloko kanye isithakazelo flat-rate ezikhanyisayo credit, isithakazelo semholo zizokwehluka. uhlelo Inkokhelo predetermined inkampani ikhadi, udinga ukukhumbula uma kutholakala. Ngokuvamile, singaphansi uthishanhloko flat-rate ezikhanyisayo ukutusa ukuthenga, esimweni ukulondoloza isikhashana wesikweletu ezijikelezayo ziningi ukuba uthishanhloko kanye nesithakazelo flat-rate ezikhanyisayo credit.
oyinhloko yomugqa oqondile ribonucleic indlela indlela ukukhokhela imali etholwe kwengezwa isithakazelo nothishanhloko. Ngokwesibonelo, ngonyaka senzalo yezivumeiwano 15%, uma ukuthenga isethi ukuze 100,000 yen izimpahla ukukhokhelwa nyanga zonke 10,000 yen, 10,000, owawungumnyaka lokuqala lwenyanga ukungezwa 1250 yen 10,000 yen futhi isithakazelo uthishanhloko ukhokha 1250 yen. Ngemva kwalokho, isithakazelo uzoqhubeka wehlise 1125 yen, futhi 999 yen kancane kancane. The last 10 izinyanga ukuqedela inkokhelo adonswe yen 10124. Inani ethengwayo, zihlukaniswe inani ukuhoxiswa imisiwe, it libhekene eziningi izinkokhelo nelinganayo.
Yiliphi elinye omele ungaphakathi oyinhloko isithakazelo flat-rate ezikhanyisayo credit, lapha indlela ukukhokhela ethile imali, kufaka inzalo. Ngo uthishanhloko flat-rate ezikhanyisayo credit uzokhokha nyangazonke isamba kanye nenzalo kuthishanhloko, kodwa lokhu uzokhokha nani, kufaka inzalo . Ngokwesibonelo, uma uthenga yen izimpahla 100,000, i-lokuqala lwenyanga kuhlanganise 1250 yen, 8750 yen futhi isithakazelo omkhulu 10,000 yen.
Ngenxa yalesi sizathu, isibalo izinkokhelo, inani izimpahla, kuyoba ngaphezu inani lezikhathi ehlukaniswa lemali lasebhange waqale setha. Uma uthenge isethi ukuze 100,000 yen izimpahla ukuze 10,000 yen nokukhokhwa nyangazonke, isibalo izinkokhelo kuyoba izikhathi 11. Eyokuqala kusukela ngenyanga ngemuva abafika kwabangu-10 izinyanga lemali lasebhange lwenyanga, kodwa 10,000 yen, 11 uma kukhona izinyanga, asele uthishanhloko 7405 yen, 7497 yen, ke ingezwe 92 yen isithakazelo iyadonswa lapha wena.
Ngaphezu kwalokho, kukhona indlela yokukhokha, ezifana fixed-rate ezikhanyisayo credit isikimu bese kuthi esele uhlelo slide, kodwa, ezimweni eziningi, kuyoba uthishanhloko yomugqa oqondile uhlelo ribonucleic noma uthishanhloko kanye nesithakazelo flat-rate ezikhanyisayo credit. Inzalo kanye inzalo ngokungafani ngq?, ngokubhekela izintshisekelo yezitolo, imali ebolekiwe ubelokhu isithakazelo. Akuvamile ukuthi ukuhlukanisa ngokuqinile e inkampani ikhadi, isithakazelo akusho ndaba kubhekwe isithakazelo alinganayo.
isithakazelo yezitolo zomthetho aziphazamiseki ngaphansi Capital Ukubhaliswa nguMthetho Izinga lenzalo Mngcele eMthethweni imali abolekise, isicelo esinjalo Imali Ukubolekwa Business Law. EJapane Credit Association, by ukuzithiba, it lihlelwe ngokuhambisana isithakazelo yezitolo kuya zoMthetho Investment ukuba ngaphakathi 20%. Ri wena. Inzalo kanye inzalo ngokungafani ngq?, ngokubhekela izintshisekelo yezitolo, imali ebolekiwe ubelokhu isithakazelo. Akuvamile ukuthi ukuhlukanisa ngokuqinile e inkampani ikhadi, isithakazelo akusho ndaba kubhekwe isithakazelo alinganayo.
isithakazelo yezitolo zomthetho aziphazamiseki ngaphansi Capital Ukubhaliswa nguMthetho Izinga lenzalo Mngcele eMthethweni imali abolekise, isicelo esinjalo Imali Ukubolekwa Business Law. EJapane Credit Association, by ukuzithiba, it lihlelwe ngokuhambisana isithakazelo yezitolo kuya zoMthetho Investment ukuba ngaphakathi 20%.